Ciyaaryahan ku geeriyooday qaraxii galabta ka dhacay agagaarka Dekeda Muqdisho - Hablaha Media Network
Ciyaaryahan ku geeriyooday qaraxii galabta ka dhacay agagaarka Dekeda Muqdisho
HMN:- Ciyaaryahan horay ugu soo ciyaaray xulka Qaranka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan Muqdisho ayaa ku geeriyooday qaraxii galabta ka dhacay nawaaxiga Dekeda weyn ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa ka dhacay maqaayad ay fariistaan dad shacab ah iyo ciidamada oo ku taal isgoyska Sheelare ee degmada Xamar jajab.
Daahir Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaano Daahir Biiroof iyo dad kale ayaa ku geeriyooday qaraxan oo ahaa mid aad u xoogganaa, lagana maqlayay magaalada oo dhan.
Sidoo kale waxaa qaraxa ku dhaawacmay dad kale oo maqaayada fadhiyay, waxaana uu qeyb ka yahay qaraxyada baabuurta loo adeegsado oo maalmihii la soo dhaafay lala beegsanayay maqaayadaha.
Inta badan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa mas’uuliyadooda sheegata Kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM.